दुःखद खबरः -१४ वर्षिया युवतीको – All top Here
डरलाग्दो दुर्घटना : मोटरसाइकलमा सवारदुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
ओली को एक्सन ! पूर्वप्रधान मन्त्री,प्रचण्ड र पूर्वगृहमन्त्रीको सुरक्षा कटौती
Home/समाचार/दुःखद खबरः -१४ वर्षिया युवतीको
दुःखद खबरः -१४ वर्षिया युवतीको
सप्तरीमा चटयाङ लागेर एक युवतीको मृ*त्यु! आज बिहान परेको अबिरल बर्षा र चटयाङको कारण सप्तरीको तिलाठि कोइलाडीकि एक १३-१४ वर्षिया युवतीको चटयाङ लागेर मृ*त्यु भएकि छिन । खेतमा काम गरिरहेको बेला अचानक आएको पानी र त्यस सङगेको चटयाङले युवतिको मृ*त्यु भएका कुरा स्थानीय द्वारा जानकारी गराइको छ ।
काठमाडाैं-बुधबार र बिहीबार देशभर पूर्ण बदली र अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेको र बङ्गालको खाडीबाट प्रवेश गरेको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायूको प्रभावका कारण पूर्व र मध्यका अधिकांश साथै पश्चिमका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको हो ।
महाशाखाले आज मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै बुधबार दिउँसो देशभर समान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने जनाएको हो । यस्तै देशका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाका अनुसार बुधबार राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा पानी पर्नेछ । देशका थोरै स्थानमा भने भारी वर्षा हुने सम्भावना छ ।
यस्तै बिहीबार देशभर सामान्य बदली रहनेछ । देशको पश्चिमी तथा मध्य भागका एकाध स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । पूर्व र मध्यका केही स्थान र पश्चिमका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले विशेषगरी पहाडी भूभागमा पहिरो जान सक्ने तथा पहाड र चुरेबाट बहने खोलामा जलसतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशखाले आग्रह गरेको छ । वर्षाका कारण हवाई तथा सडक यातायातमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । –रासस ।
दुखद खबर २ जनाको मृत्यु २० सम्पर्क विहीन
भर्खरै। विराटनगर बाट आयो दुखद खबर
।उपचारको क्रममै एक महिलाको शङ्कास्पद मृत्यु
बुवाले आमालाई कु’टे, बालक छोराले गरिदिए बुवाको ह’त्या
सुनौलीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस धादिङमा दुर्घटना